IIBKA AC MILAN: Guddigii Fulinta ee AC Milan oo lakala diray – Gool FM
(Milano) 12 Abriil 2017 – Guddiga dhexe ee AC Milan ayaa lakala diray kaddib markii ay yeesheen kulankoodii ugu dambeeyay kahor iibka lagu wado in berri gacanta Silvio Berlusconi looga bixiyo kooxda oo uu iibsanayo Yonghong Li.
Saaka aroortii ayuu Yonghong Li oo kasoo duulay Hong Kong, wuxuu soo caga dhigtay magaalada Milano, isagoo isla maantaba la kulmay Marco Fassone iyo Massimiliano Mirabelli.
Waqti sii yara horreeysey ayaa waxaa kulmay Guddiga Dhexe ee AC Milan oo yeeshey kulankoodii ugu dambeeyay muddo 31 sano ah oo uu kooxda lahaa Berlusconi, waxaana kulanka isku casilay gudigaasi, iyadoo lasoo werinayo in Adriano Galliani, oo kooxda joogey intii uu kooxda joogey Berlusconi, uu xafiiskiisa ka qaatay agabkiisii. Xubinta qura ee ka hareeysa guddiga is casilay waa Leonardo Cantamessa.
Maamulka cusub ee Fassone, Li iyo Mirabelli ayaa kulamo is daba joog ah yeelanayay balse way diideen inay saxaafadda la hadlaan, iyadoo ay u badan tahay in ay saxaafadda la hadlaan Jimcaha, halka berri barqadii lagu wado in la saxiixo heshiiska rasmiga, iyadoo kaddibna ay casho ka dhici doonto degaanka Arcore ee Berlusconi.